Rincón del Vago: Khayraadkeenna inaga soo saaray dhibaatooyin waqti - Geofumadas
Sebtember, 2018 Internet iyo Blogs
Inta badan waxaa la yiraahdaa xilliga ardaygu waa midka ugu raaxada badan iyo kuwa ugu wanaagsan ee mar walba nolosha nolosha. Waqtigaas oo ah noloshii marka qofku uu ku noolyahay daryeel la'aan, isagoo aan u baahnayn in uu ka fikiro wax badan oo ku saabsan shaqada oo aan walwal gelin mustaqbalka; muddada nolosha marka dareenka keli ah ee aad leedahay ay sabab u tahay shaqo go'an oo la sugayo ama imtixaan aan weli la aqbalin.
Si kastaba ha ahaatee, dhab ahaantii dhammaanteen waxaan la kulannay mararka qaar noloshooda ka hor intaanay hawsha nagu dhiirigalineynin oo aan ahayn kaliya, waa ay adagtahay in aan qabano ama si fiican u qabano. Sababtoo ah sababahan waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado jiritaanka iyo xaddiga macluumaadka faa'iido leh ee website-ka inoo soo gudbin karo https://www.rincondelvago.com. Maaha arrin haddii ay tahay dib u eegis buug ama haddii ay tahay inaad ka jawaabto su'aasha waxa la sameeyo marka ay dhacdo qarxinta volcanic, boggan waxaad ka heli kartaa dhamaan noocyada kala duwan.
Hadda, ka feker in ardayga dugsiga sare ee danaynaya injineernimada ama daawada uu leeyahay inuu qoro daraasad muhiim ah oo ku saabsan astaamaha muhiimka ah Don Quijote ama waxkasta oo kale ah. Iyada oo dhiirigelin iyo waxyaalo badan oo kala duwan, hawshani waxay u muuqataa mid aan suurtagal ahayn, sax? Sidoo kale, haddii ardayga jecel suugaantu waa inuu qabtaa shaqaguriga casharrada kiimikada ama fiisikiska, hawshu waxay noqon kartaa mid adag ama ka badan. Shaqooyinkaasi badanaa waa kuwo khasab ah mana tixgeliyaan danaha ardayda. Taas bedelkeeda, had iyo jeer waa ardayga "waa qalad" sababtoo ah ma shaqeynin si guul leh ama aan shaqo ku jirin waqtigii loogu talagalay. Marar badan nidaamka waxbarashadu wuxuu calaamad u yahay ardayda sida "caajis" ama "shaqaale yar". Laakiin, tan iyo "feerka" waxay leeyihiin "gees" xaaladdu aad ayay u fiicantahay.
Websaydkani waxay ardayda siinaysaa waxyaabo badan oo kala duwan, laga bilaabo meelaha kala duwan ee waxbarashada iyo mawduucyo kala duwan. Laakiin waxaa suurtagal ah in waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu xoojinayo halkan ay tahay in bogga uu daboolayo dhammaan ama dhammaan mawduucyada xiisaha leh marka ay timaaddo shaqada dugsiga ama jaamacadaha. Sidaa daraadeed, ardayda aan dareemin dhiira gelinta shaqa-guriyeedka mawduuca kaliya waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in daaweyntu jiraan iyo inay ogaadaan meesha ay tahay inay eegaan.
Rincón del Vago wuxuu bixiyaa dhamaan noocyada kala duwan, haduu xiriir la leeyahay Xisaabta, Taariikhda, Luqadaha, Karinta ama Sharciga. Intaas waxaa dheer, waxyaabaha ku jira boggani waa mid si fiican loo abaabulay maadada, iyada oo ujeedadu tahay in ardayda la siiyo fursad ay ku helaan iyo raadinta macluumaadka loo baahan yahay. Marka maadada la helo, ardaydu waxay haystaan ​​maadooyinkooda lagama maarmaanka u ah inay diyaariyaan imtixaan, qabtaan shaqadooda guriga ama qoraan warqad. Waxa ugu fiican oo dhan waa in la ogaado in, ka duwan waqtiyadii hore markii mawduuca uu ku jiray isku-xirnaanta maktabadda, macluumaadkaan waa mid deg deg ah, fogaan ah hal guji, iyo in aan ka heli karno wakhti kasta iyo meel kasta.
Sidoo kale, marka laga reebo nuxurka loo baahan yahay si aan u qabano shaqo aan nagu dhiirigelin, boggan waxaan ka heli karnaa waxyaabo badan oo ku saabsan maadooyinka ay naga doonayaan. Tusaale ahaan, ardayga xiisaha u leh injineernimada wuxuu heli karaa waxa uu raadinayo inuu qoro qoraaga fasalka suugaanta, laakiin isla markiiba wuxuu ka heli karaa maqaalo ka socda danihiisa. Waxaad ka heli kartaa bandhigyada ku saabsan 40 sano ah ee tiknoolajiyada gacanta mobile, halkaasoo aan ka hadleyno horumarka qalabkan oo dhan aan wada isticmaalno wax badan maanta. Sidoo kale, haddii aynnu xiiseynayno juqraafi, waxaan soo saari karnaa qoraallo ka hadlaya meelaha aan si fiican u yaqaanno caalamka galbeedka, sida Afganistan, ama qaaradda Afrika.
Waxaa sidoo kale muhiim ah in la xuso Magazine Rincón del Vago, kaas oo ah bog - magazine boggan halkaasoo wararka la xidhiidha barashada waxbarashada la daabacay. Wargelinta noocan oo kale ah ayaa badanaa ku jira macluumaad qiimo leh oo aan ahayn ardayda oo keliya, laakiin sidoo kale macallimiin ku yaalla goobo kala duwan. Tusaale ahaan, majaladdan waxaa ku jira qoraalo ku saabsan horumarinta farsamada casriyeynta, hababka wax barista, barashada internetka ama kuwa kale kuwaas oo nagu siin kara qalab waxtar u leh barashada barashada ama barista. Sidoo kale, joornaalada waxaa lagu daabacay halkan si xirfadleyaal ah oo ka socda goobo kala duwan kuwaas oo inta badan ay noqon karaan kuwo aad u xiiso badan oo faa'iido u leh asxaabtooda. Sidoo kale, joornaalkan wuxuu daabacaa macluumaadka ku saabsan koorsooyinka interneedka ee laga yaabo inay xiiseeyaan, iyadoon loo eegin maadada iyo nooca kooraska laftiisa.
Dhammaantood waxay yidhaahdeen, Rincón del Vago waxaa loo tixgelin karaa "lamaanahayaga dijitaalka ah", lamaanahan oo marwalba leh dhammaan qoraalada iyo dhammaanteena leenahay ama haysannay. Farqiga kaliya ayaa ah mid sahlan helitaanka macluumaadka aan u baahanahay, sababtoo ah tani waa, sida hore loogu soo sheegey, hal guji oo la heli karo wakhti kasta.
Si loo soo gabagabeeyo, waxaa muhiim ah in la helo ilaha macluumaadka sidan oo kale ah, taas oo diyaar u ah in ay na siiso nuxurka waxyaabaha la rabo marxalado adag. Laakiin waa in sidoo kale la ogaadaa in ay aad muhiim u tahay in la ogaado sida loo isticmaalo waxyaabahaas, taas oo ah, si aad u cad in tani ay tahay tixraac oo kaliya iyo in shaqadeena xaalad kasta lagu soo koobi karo content sababtoo ah taasi waxay ka dhigi lahayd qalqal.
Post Previous«Previous 6 daabacaadda geo-engineering ee bilaash ah
Post Next Koorsooyinka ugu fiican ee ArcGISNext »